Nagu saabsan - Hengshui Decheng Makiinado & Qalab Co., Ltd.
Decheng Group wuxuu ka kooban yahay laba shirkadood:
Hengshui Decheng Makiinado & Qalab Co., Ltd.
Hengshui Decheng Makiinado & Qalab Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2005 waxayna taariikh u leedahay 16 sano, waa shirkad mashiin & qalab dhameystiran oo ku milma qalabka baaritaanka & horumarinta, wax soo saarka, iyo iskaashiga dhaqaalaha & farsamada shisheeye. In 2008, shirkadeena maray ISO9001 shahaadada nidaamka tayada nidaamka. Shirkaddayadu waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo dhammaystiran oo ku takhasusay naqshadeynta, wax soo saarka, bixinta, rakibidda iyo hawlgelinta, iyo adeegyada kale ee iibka kadib. Waxaan ku guuleysan karnaa nidaamka xakamaynta korantada ee xirfadleyda annaga kaligeen. Intaa waxaa sii dheer, shirkadeennu waxay leedahay saldhiggeena wax lagu maamulo ee saamiga lagu maamulo.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay: Khadka wax soo saarka guddiga Gypsum, khadka wax soo saarka budada Gypsum (gypsum-ka dabiiciga ah, gypsum-ka dilaaga ah iyo polyps-ka loo yaqaan 'phosphoric gypsum'), Mashiinka loo yaqaan 'Gypsum block mashiinka', mashiinka saqafka ah ee saqafka sare ee Gypsum, Khadka wax soo saarka calyntka ee loo yaqaan 'Gypsum stucco calcination line', Khadadka waxsoosaarka guddiga sibidhka, khadka wax soo saarka Sibidhka, Qalabka Macdanta, Qalabka Quarry, Mashiinka baakadaha guddiga balastarka Gypsum, Mashiinka Gypsum mashiinka shabakadda birta, iwm Isla mar ahaantaana, waxaan ku siin karnaa hal mashiinno, qalab dayactir loogu talagalay khadadka wax soo saarka kor ku xusan; waxaan soo saareynaa alaabada ceyriinka ah ee looxyada & wax soo saarka dusha, sida istaarj wax laga badalay, saliida silica, wakiilka xumbada, WRA, xabagta, filimka PVC, xabagta PVC, aluminium aluminium, koollada aluminium, iwm.
Shirkadeena sidoo kale waxay leedahay khibrad farsamo yaqaan injineernimo khibrad leh. Sidaa awgeed, inta shirkaddeennu macaamiisheenna siiso mashiinno tayadeedu sarreyso, injineeradeenna xirfad-yaqaannada iyo shaqaalaha iyo teknoolojiyadda wax soo saarka tayada sare leh ayaa macaamiisheenna siiya dal iyo dibadba adeegyo farsamo oo buuxa si ay macaamiisheennu uga dhigaan “inay ku hubsadaan adeegsiga oo lagu qanco ”.
Sannadihii ugu dambeeyay, shirkadeennu waxay guulo waaweyn ka gaadhay mashaariicdii qalab siinta ee dalal iyo gobollo badan, sida Russia, Oman, Iran, UAE, Saudi Arabia, India, Kazakhstan, Uzbekistan, Bangladesh, Ethiopia, Qatar, iwm. ka helay amaan sare macaamiisheena tayada wax soo saarka iyo iibka kadib.
Shirkadeenu waxay leedahay kooxo xirfadlayaal ah oo dhameystiran oo mas'uul ka ah naqshadeynta, soo saarista, bixinta iyo adeegga gadaal si ay ugu adeegaan macaamiisha gudaha iyo dibaddaba qalbi buuxa iyo niyad sami.
Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa asxaabta ka kala socota adduunka oo dhan inay yimaadaan oo na soo booqdaan!